Siboniso Langa – The Ulwazi Programme
Ukuhamba kwesikhathi kusho khona ukushintsha kwezinto, ubuchwepheshe be-Technology benza izinto zibelula. Ukuba khona kwezinhlaka zomculo kanye nokubukiswa kwezinto zesimanje sezivule inkundla yokuthi kubelula ukubona izinhlobo ezihlukene zamasiko ngokwehlukana kwezizwe. IKwaZulu Natali isifundazwe esikhulu kanti ke noma amasiko amaningi esiwenzayo efana kepha ukwenza kuyahlukana . Isibonelo nje indlela okuvunulwa ngayo kwehluka ngezigodi. Uma uya koMzimkhulu nakoBergville … Read more
Categories Music, News Tags Umculo, Youtube
Aziswelakali izidumo kumculo kaMaskandi, kukancane ungazizwa izidumo kulomculo. Noma kungamazi ukuthi izinsizwa zihlale zihlale zincwekisane kulomculo kepha le kaMdumazi noNjoko kubukeka sengathi isekude ukuphela . Bucishe bachitheka bugayiwe lezinsizwa zifuna ukubambana ngezihluthu. Impi yalamabhungu indala kakhulu ngoba zigadlana ngisho kuzo izingoma zazo, futhi kubukeka sengathi akekho impela ofuna ukugoba uphondo phakathi kwabo bobabili. Lezinsizwa bezimenywe … Read more
Categories Music, People Tags Mdumazi, Njoko
Ukwetheswa kweziqu kwabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme KwaZulu iUniversity of KwaZulu Natal obekwenza endaweni yaseWestville kudonse amehlo eNingizimu Afrika yonke. Lonke kwenziwe amavideo athwetshulwe khona kuleli hholo lase Westville abafundi besina, bebhikla ingoma abanye bedansa bekhombisa ukuthi bakuthakasele kanjani ukwetheswa kweziqu zabo. Phela kuzo khumbuleka nokuthi beku ngokokuqala kusuka kunyaka ka-2020 ukuthu umcimbi wokwethweswa kweziqu ubuyele … Read more
Lomhlaba kawunoni ngempela, uwathathe onke amaqhawe omculo wesintu, uma singabala nje amaciko aselele kobandayo singabala size sikhohlwe ukuthi sebebangaki abalele kwabhekabezayo. USandile Mbongwa ngamanye amaciko abedlala ushuni wawo wodwa engawubangi namuntu futhi nendlela abebhala ngayo izingoma ibihluke kakhulu kwamanye amaciko. Noma ebekwazi ukudlala isigingci kepha bekungasiyona kuphela into akwazi ukuyidlala ngoba neViolin ubekwazi njengoba ayeqale … Read more
Categories Music, People Tags Sandile Mbongwa
Izinhlaka/Izinsimbi zika Maskandi
Umculo kamaskandi unezinhlaka ezenza kuphume inoni leli elisuke lizojabulelwa abantu, noma nje sithi izinhlaka ezenza ingoma noma iculo lelo kube iculo eliphelele ngoba phela ingoma akusikhona nje ukucula kuphela kodwa kuhambisana nezinsimbi zakhona eziyizinhlaka zayo. Kuleli khasi ke sidingida zona izinhlaka “Instrumentation” ezisetshenziswa ukwakha ingoma. Ngaphambi nje kokuba kwakhiwe ingoma kunento ebizwa ngokuthu ushuni “tune” … Read more
Categories Music Tags Izinsimbi zikaMaskandi
Zikhala ngampela ke manje eThekwini esifundeni sika baba uZikalala njengoba zizobe zihlabana amalunda ngoJuni. Lokhu phela kusuka ekutheni kuza ingoma enkulu ngomhlaka 4 Juni 2022, ePeoples Park umuntu uzobe ebambe eyakhe eyenqina njengoba kuzobe kudlalwa ushameni onenkosi phakathi. Kujwayelekile ukuthi uma kukhona imicimbi yesintu efana nekamaskandi amagoso kashameni asale ngaphandle. Okujwayelekile nje ukuthi kube imidlalo … Read more
Categories Culture Tags ingoma, ushameni
Abantu Amasiko esintu arts Clan Praises Communities Durban Ekhaya eThekwini eThekwini Municipality Ezobuciko featured Home Ikhaya Imicimbi yesintu Imidlalo yomdabu Imilando ngabantu Imiphakathi Imithi yesintu Indian South Africans indigenous games isiZulu Izibongo Izilwane Izindaba Izindaba zasendulo Izindawo Izinkolelo zesintu izithakazelo Legends marriage Music No Longer At This Address Personal Histories Places Poetry Religion Shembe Stories Surnames Traditional Beliefs Traditional Ceremonies Traditional customs traditional medicine Umculo Umshado